DAAWO SAWIRADDA: In ka badan 30 ardey oo ka qalin jabisay xifdinta Qur’aanka Kariimka. | gobolada.com
Jan 9, 2020 - jawaab
Xaflad aad u qiimo badan oo loo sameeyey ardey ka qalin jabisey Madarisatu Qalam kuwaas oo dhameeyey Quraanka Kariimka ayaa ka dhacdey dugsiga Quraanka Madarisatu Qalam ee deegaanka Nakivali dalka Uganda.
Xafladan oo ardeyda qalin jabisey ay isugu jireen 23 wiil iyo 8 gabdhood ayaa waxaa ka soo qayb galey masuuliyiin kala duwan oo ka hadley dhamaantood muhiimada uu leeyahay barashada quraanka Kariimka.
Xoghayaha Warfaafinta iyo Waxbarashada maamulka Soomaalida Maxamed Faarax Cali oo halkaa ka hadley ayaa dhiirigeliyey guud ahaan waxbarashada kala duwan isaga oo xusey in barashada quraankana ay tahay mid waajib ku ah shacabka Soomaaliyeed oo dad Muslin ah.
Xoghayuhu waxa uu intaa ku darey in gudiga maamulka Soomaalidu uu qayb weyn ka qaadan doono horumarinta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed.
Waxaa kale oo xaflada ka Hadley Masuuliyiin kala duwan, waalidiin iyo Culumo, gudoomiye Kuxigeenka gudiga maamulka Soomaalida Nadiifo Cabdi Xirsi ayaa u soo jeedisey bulshada Soomaaliyeed ee Nakivali ku dhaqan in ay midoobaan islamarkaana ay iska kaashadaan baahiyaha jira ee la xiriira horumarinta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed.
Dadka halkaa ka hadley ayaa waxaa ka mid ahaa Bishaar Axmed oo ka mid ahaa waalidiinta ay caruurtoodu qalin jabineysay, Maxamed Dhaqane Moosow oo kamid ah odayaasha Soomaaliyeed, Maxamuud Xasan Maxamed iyo Imaamka Masjidul Aqsa Macalin Aadan Xuseen. Waxaa kale oo hadal Qiimo badan oo isugu jirey waano iyo dhiirigelin halkaa ka soo jeedisey Maamo Geelle Jaamac Seexde.
Xaflada intii ay socotey ayaa waxaa Hadiyado Qiimo badan la gudoonsiiyey macalimiinta Madarisatu Qalam Macalin Cabdullaahi iyo Macalin Aadan oo amaan iyo bogaadin looga soo jeediyey xaflada sida wanaagsan ee ay u soosaaraan ardey si weyn u xafidsan Quraanka Kariimka.
Qaar kamid ah Culumadii halkaa ka hadashey ayaa sheegay in ay yartahay dugsi ay hal mar ka qalin jabiyaan 31 Ardey, taasna ay ku timid dadaalka macalimiinta dugsiga.
Xaflada oo ku dhamaatey xiisihii ay ku bilaabatey iyada oo aan daal iyo caajis la dareemin ayaa waxaa daadihinayey oo Mikarafoonka xiriirintu gacanta ugu jirey Aqoonyahan Axmed Cabdiraxmaan oo tusaalooyin iyo aragtiyo uu ku darsadey intii ay xafladu socotey ay noqdeen kuwa meelmarey.
Maamulaha Madarisatu Qalam Macalin Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa sheegay in dufcada maanta qalin jabineysa ay tahay dufcadii 4aad ee ka qalin jabisa Dugsigooda.
Toddobaadkii hore ayey aheyd markii xaflad tan la mid ah loo dhigey 13 Ardey oo ka qalin Jabisey Quraanka Kariimka Madarisatu Towxiid oo iyana ku taala Nakivali dalka Uganda.